Ukuphupha uMthengisi Discover ➡️ Fumana kwi-Intanethi ▷ ➡️
Umthengisi olungileyo angathengisa nantoni na, batsho. Kwilizwe lethu lezorhwebo, ukuthengisa yeyona nto iphambili kuyo yonke indawo, kwaye ukuba ngumrhwebi yenye yezona ndawo zinobuchule. Umthengisi angathengisa ukutya, indlu, okanye impahla. Kuya kufuneka ufunde ukuba ungazithengisa njani iimoto. Abanye abathengisi bathengisa izilwanyana ezifana nezinja okanye amahashe.
Enkosi kwi-Intanethi, ukuthengisa kwabucala nako kunokwenzeka kakhulu inkulu kune kwixa elidlulileyo kwiivenkile ezibonakalayo. Umthengisi oyingcali oqeqeshiweyo uqhelene kakhulu nesebe lakho kwaye unokunika umcebisi iingcebiso ezilungileyo. Kodwa baninzi kakhulu abasebenzi bexeshana abasebenza kwintengiso, abanolwazi lweempahla, ngokwendalo, azilunganga kangako.
Iphupha lomthengisi okanye umrhwebi, ngokunokwenzeka ikwangumthengisi wefandesi, lingavusa ephupheni ithemba lokuba umnqweno uza kuzaliseka kungekudala. Unokuphupha ngezinto ongathanda ukuzithenga ngobomi bokwenyani, kodwa okwangoku uzikhanyele. Into ebalulekileyo ekutolikeni kwamaphupha yindima yephupha: uyayithenga into okanye ungumthengisi ngokwakhe?
1 Uphawu lwephupha «umthengisi» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «umthengisi» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «umthengisi» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «umthengisi» - ukutolikwa ngokubanzi
Iimpahla, ezinikezelwa ngumthengisi ephupheni, zibandakanya ukutolikwa kwephupha ubuninzi bezinto ezinikezelwayo xa uphupha. Ngaba uzibona njengomthengi ongakwaziyo ukuthatha isigqibo kwaye ngubani Uncedo efunekayo ngumthengisi, uphawu lwephupha lubonisa ukungabikho Ukuzimisela phantsi. Ke ukuphupha kunokuphosa amathuba amahle amaxesha ngamaxesha.
Ukuba iimpahla zijolise ephupheni, iphupha lingaphulukana nezinto ezithile ebomini bakho. Ukuba ugcina incoko nomthengisi engqondweni, isimboli yephupha yintetho yokukhangela Iirati kunye noncedo. Ukuba kugxilwe ekuhlawuleni into oyithengayo, esi sisikhumbuzo kutoliko lamaphupha ukuba iphupha libeka ukubaluleka kakhulu kwizinto eziphathekayo. Kuya kufuneka uqaphele ukuba ezinye izinto ezibalulekileyo azithengiswa.
Ukuba la mntu uphuphayo ungumthengisi ephupheni lakho, umzekelo kwivenkile yentengiso, umbuzo uphakama ngokuchazwa kwephupha, ungathanda ukuthengisa ntoni. Ngokunokwenzeka uphawu lwephupha lufanekisela umbono okanye iprojekthi yeyiphi umlandeli ifuna. Kodwa mhlawumbi ikwangulo mntu ngokwakhe, lowo amaphupha afuna ukuthengisa ngeyona nto intle.
Kwingcaciso edumileyo yamaphupha, isimboli yamaphupha iyalumkisa, ukuba uyazibona njengomthengisi, ngempatho-mbi, mhlawumbi nokungalunganga, kunye nobunzima bezezimali. Ngaphezulu kwayo yonke loo nto, ivenkile engenanto ibonisa ukubala okungachanekanga.
Uphawu lwephupha «umthengisi» - ukutolikwa kwengqondo
Kwakhona ukutolikwa kwengqondo kwephupha kubalulekile ukuba umntu ophuphayo ephupheni lakhe ungumthengi okanye umthengisi. Ngubani othenga into eyonelisayo umnqweno. I-subconscious itsalela ingqalelo kwinto engekhoyo kwi-psyche. Ngokutolika uphawu lwephupha, izinto ozithengayo zinika ulwazi ngakumbi kule meko.
Ukuba iphupha likwindima yomthengisi, umzekelo kwimakethi yentakumba, oku kubonisa umfanekiso ongathanda ukuwudlulisela kwabanye bakho. Kwinkcazo yephupha, isimboli yephupha inokuba sisilumkiso phambi kwe ukunciphisa Ndiyazi ngomphefumlo wakho. Ukuphupha kusenokwenzeka ukuba kulahle izibonelelo zezinto ezibonakalayo kunye neenkolelo zakhe, ke, kwayena.
Ukongeza, uphawu lwephupha "umthengisi" linokubhekisa kokungamkelekanga Iimpawu zomntu okanye ubonise iimvakalelo ezicinezelweyo. Ngengqiqo yokuba ukuphupha kuyabathengisa ephupheni, uyabalahla.
Uphawu lwephupha «umthengisi» - ukutolika kokomoya
Kwinqanaba elidlulayo, uphawu lwephupha "umthengisi" likwiphupha lokutolika uphawu oluqinisekileyo, ukuba utshintsho lithetha ukuphuculwa kwephupha. Isivumelwano esitywiniweyo ngokuqinisekileyo sikhokelela kutshintsho.
Ngokwasemoyeni, oku kuthetha ukuba ukukhula ngokomoya iyakwenzeka nakweyiphi na imeko okanye sele yenzekile.